Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-100
« Newsletter n° 99
Newsletter n° 100 »
publié par Admin 2, le vendredi 17 août 2018
MIANTSO ANTSIKA REHETRA HANARA-MASO NY ZAVA-MISEHO AO AMPARIHIBE COMMUNE RURALE ANDRANOFOTSY DISTRIKA MAROANTSETRA
Manana olana mikasika ny taniny ny fokonolona ao Amparihibe Kaominina ambanivohitra Andranofotsy Distrika Maroantsetra, Faritra Analanjirofo.
Kasain’ny Ben’ny Tanàna sy ny manam-pahefana sasany any an-toerana ho esorina amin’ny fokonolona ny taniny izay misy tanimbary, voly lavanilina sy jirofo ary kafe, kijanan’omby ary fasana.
138 hekitara ny velaran-tany voakasika.
Tsy dia mazava loatra ny antony manosika sy tena zava-kendren’ny manam-pahefana fa mbola mitaky fanadihadiana lalina izay vao miantomboka. Toa misy olona avy amin’ny fokontany hafa manodidina tiana hafindra ao amin’io velaran-tany io no antony hanalàna ny mponina sy tompon’ny tany ao amin’izao fotoana izao. Tsy fantatra inona no mahatonga ny BNGR (Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes) ho tafiditra amin’ilay resaka.
Misy vaovao tsara sady dingana lehibe mahavelom-bolo kosa, izay tiana ho zaraina amin’ny namana sy mpiray tanindrazana. Namoaka fanapaha-kevitra teo aloha ny Ben’ny tanàna fa tsy mahazo mandia anatin’ny faritra voalaza sy tsy mahazo mampiasa ireo tany ireo ny fokonolona sy ny tompon’ny tany. Nametraka fitoriana momba izany ny fokonolona ka nandresy rehefa nivoaka ny didim-pitsaràna tamin’ny talata faha-14 aogositrateo.
Saingy mbola sarotra sady mitohy ny olana.
Mbola misy fitorian’ny fokonolona mizotra ary tsy mbola nivaly any amin’ny fitsaràna momba ny efa nakàn’ny hafa hazo maniry eo amin’ilay velaran-tany sahady. Mifamahofaho ny raharaha any anivon’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany. Kely hery, ary tena any ambanivolo mitokana lavitry ny lalambe sy ny haino aman-jery ireo olona miady mafy miaro ny taniny. Mandrahona sy mampatahotra ireo izay miezaka hampahafantatra amin’ny rehetra ny fandehan-javatra ny manam-pahefana sasany ao an-toerana.
Koa manao antso avo amintsika rehetra ny Fikambanana TANY miaro ny tany Malagasy hanara-maso ny zava-miseho ao Amparihibe ary hanakana izay fikasàna tsy ara-dalàna sy tsy rariny.
Parisy, faha-16 Aogositra 2018
Fikambanana TANY miaro ny tany Malagasy – Collectif pour la defense des terres malgaches – TANY